SPM News: Somali 4.19.22
Published April 19, 2022 at 1:11 PM CDT
Guddoomiyaha Nebraska Pete Ricketts ayaa saxiixay sharci Isniintii u oggolaanaya gobolka inuu horay u sii wado qorshayaasha lagu dhisayo kanaalka Colorado si biyaha looga weeciyo Webiga South Platte sababtoo ah cabsida ku saabsan isticmaalka biyaha ee sii kordhaya ee Colorado. Ricketts ayaa soo jeediyay mashruuca kanaalka si uu u caawiyo ilaalinta xuquuqda biyaha Nebraska, in kasta oo saraakiisha Colorado ay su'aal ka keeneen baahida loo qabo. Sharcigu wuxuu u oggolaanayaa Nebraska inay bilowdo shaqada ku dhawaad $500 milyan kanaalka, laakiin cabbirka waxaa ku jira kaliya $53.5 milyan si loo bilaabo mashruuca. Saraakiisha ayaa ku qiyaasay in ay qaadan doonto sideed ilaa 10 sano in la dhamaystiro mashruuca.
Kani waa usbuucii 15-aad ee kalfadhiga sharci dejinta ee Iowa 2022, laakiin ma jiro wax heshiis ah oo wali dhex mara aqlabiyadda Jamhuuriga ee sharciyaadka qeexaya miisaaniyada gobolka ee sanad xisaabeedka ee bilaabmaya Luulyo 1st.
Laba ka mid ah soo jeedinta siyaasadda ugu sarreysa ee Guddoomiyaha Gobolka Kim Reynolds ayaa la hakiyay iyadoo ay weheliso gorgortanka miisaaniyadda. Xisbiga Jamhuuriga ee Senate-ka ayaa meel mariyay qorshaha guddoomiyaha gobolka ee ah in waalidiinta la siiyo lacag si ay u daboosho kharashaadka dugsiyada gaarka loo leeyahay, halka Jamhuuriga Aqalka Sare aysan weli u keenin cod.
Saraakiisha caafimaadka ee gobolka Iowa ayaa sheegay in heerka caabuqyada galmada la isugu gudbiyo, ama STIs, uu kordhay sannadkii hore.
Boodka ugu muhiimsan wuxuu ahaa kiisas cusub oo isfilis ah, kaasoo kordhay 55 boqolkiiba sannadkii ka horreeyay.
Saraakiisha ayaa sheegay in kiisaska waraabowga ay ku bateen kooxo taariikh ahaan lahaa heerar hoose, sida haweenka iyo kuwa ku nool dhulka miyiga ah.